ISundowns isibekwe icala yi-PSL | News24
ISundowns isibekwe icala yi-PSL
Cape Town – IMamelodi Sundowns isibekwe icala yiPremier Soccer League (PSL) ngokuphula umthetho omayelana nokufakwa komdlali okungafanele ukuthi adlale emdlalweni weMultiChoice Diski Challenge (MDC).
Ngokwesitatimende sePSL, uThabang Sibanyoni wabonakala emdlalweni weqembu leDowns eligijima kuMDC ngomhlaka-4 kuDisemba nalapho leli qembu labambana khona ngo-1-1 neChippa United yize ayemisiwe ngemuva kokuthola amakhadi aphuzi amane.
OLUNYE UDABA: Ugoloza ukudlala umdlali ongenele isiteleka
“I-PSL isibeke icala iSundowns kanye nomdlali wayo uThabang Sibanyoni ngokuphula umthetho u-55.1 weFIFA Disciplinary Code kanye nomthetho weNSL u-54.1.4,” kusho isitatimende seligi esithunyelwe kwabezindaba.
“Lokhu kuza ngemuva kokuthi iSundowns ifake uSibanyoni emdlalweni weMDC ngomhlaka-4 kuDisemba 2016 phezu kokuthi lo mdlali esethole amakhadi aphuzi amane ngakho futhi kumenza angafaneleki ukudlala ngesizathu sokumiswa emdlalweni.
“ISundowns kanye noSibanyoni bazovela ngaphambi kwekomidi eliqondisa izigwegwe elizobanjwa yiligi ngomhlaka-8 kuFebhuwari.”